Muqdisho oo muddo 24 sanno kaddib marti galinaysa shirka wasiirrada arrimaha dibadda IGAD - iftineducation.com
Muqdisho oo muddo 24 sanno kaddib marti galinaysa shirka wasiirrada arrimaha dibadda IGAD
iftineducation.com – Caasimada xasilooni darida ay ka jirto ee Muqdisho ayaa wax ka badan 24 sanno kaddib marti galin doonta shir weynaha wasiirrada arrimaha dibadda dalalka ku midoobay IGAD.
War laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lugu xaqiijiyay wasiirrada arrimaha dibadda Afrika inay Muqdisho ku shiri doonan horraanta todobaadka soo socda.
Saxaafadda ayaa baaisay in shirku uu dhici doono 10-ka bishan Jannaayo oo ku beegan Sabtida soo socota, iyadoo intiisa badan looga hadli doono arrimaha Soomaaliya.
Wararka la xiriira shirka wasiirada arrimaha dibadda waddamada ku bahoobay urur-goboleedka IGAD ayaa sheegaya in mar horaba ya Muqdisho ka socoto qaban qaabada qabsoomida shirka.
Shirka waxuu socon doona hal maalin,balse haddii uu qabsoomo waxuu muujin doona sawir cusub oo Muqdisho ah,maadaama loo arko magaalo an nabdooneyn.
Wasiirrada arrimaha dibadd dalalka Itoobiya, Uganda, Kenya, Suudaan, South Sudan iyo Jabuuti ayaa lagu wadaa inay Muqdisho yimaadaan dhammaadka todobaadkan si ay uga qaybgalaan shirka uga furmaya Muqdisho markii ugu horreeyay.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirka wasiirrada ka socda dalalka IGAD furi doona, maadaama ay Somalia xubin muhiim ah ka tahay IGAD oo ah urur ay ku mideysan yihiin dalalka ku yaalla Bariga Afrika.
Hoggaanka IGAD oo ay sannadkan haysay dowladda Itoobiya ayaa la filayaa in dhawaan ay qabato Soomaaliya, inkastoo aan si dhab ah loo xusin xilliga ay Soomaaliya qaban doonto madaxnimada urur-goboleedka Geeska Afrika.
Kulanka urur goboleedka bariga Afirka ee Muqdisho ka dhacaya ayaa waxay fursad weyn u tahay dowladda Soomaaliya oo ah dowladdii ugu horreysay ee rasmi ah oo caalamku aqoonsaday tan iyo markii xukunka laga tuuray 1991-kii dowladdii milateriga ahayd.